Magacyadda musharixiinta xilka madaxweyne oo illaa iyo haatan is-diiwaan gelisay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Magacyadda musharixiinta xilka madaxweyne oo illaa iyo haatan is-diiwaan gelisay (AKHRISO)
Illaa 4 musharax oo ka tirsan mushrixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in maalintii shalay ay is-diiwaan geliyeen kadib markii guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in la bilaabay is-diiwaan gelinta doorashada.
Guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa xaqiijiyay in illaa 4 musharax ay haatan is-diiwaan geliyeen, kadib markii ay buuxiyeen shuruudaha laga rabo musharaxa u tartamaha xilka madaxweynaha.
Musharixiintaasi ayuu sheegay in la gudoonsiiyay shahaadooyinkooda, kadib markii Bankiga dhexe ay kala yimaadeen caddeyn qoraal ah oo muujinaya inay bankiga ku shubeen lacagta laga doonaya musharixiinta oo dhan 30-kun oo doollar midkiiba.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa inay dhacdo 8-da bisha Febraayo ee sanadkaan.
Musharixiinta illaa iyo haaan is-diiwaan gelisay ayaa kala ah:-
1- Shariif Sheekh Axmed
2- Cumar C/rashiid Cali
3- Maxamuud Maxamed Culusow.
4- C/qaadir Cosoble Cal
Dhinaca kale, musharixiinta haatan is-diiwaan gelisay ayaa waxay tagi doonaan xarunta guddiga doorashada madaxweynaha Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, si ay halkaasi uga soo qaataan shahaadooyinkooda.